မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကင်တာနားသို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကပေးပို့သောအိတ်ဖွင့်ပေးစာ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Cover Faces » မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကင်တာနားသို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကပေးပို့သောအိတ်ဖွင့်ပေးစာ	43
Posted by mike tee on Aug 2, 2012 in Cover Faces, Creative Writing, Islam, Mandalay Gazette, News | 43 comments
mike tee has written2post in this blog.
View all posts by mike tee →	Blog
ပင်လယ် ပျော် says: မိုက်တီး… သင်ရေးသားထားသော စာများသည်တစ်ဖက်သက်ဆန်လွန်းသည်..မုဒိမ်းသမားများကို အဘယ်ကြောင့် “ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာ” ဟုပြောသနည်း..ဒီမျက်နှာများက ဘယ်သူဆိုတာ အားလုံးသိပါသည်..
saline tinmg says: မင်းတို့လီးလို့လိုလိုမှိုလိုလိုဖြစ်နေကြတာလား ပင်လယ်သေရဲ့။သူရေးတာအမှန်ချည်းဘဲ၊ငါထောက်ခံတယ် တယ် တယ်. .
ပင်လယ် ပျော် says: စကားပြောယဉ်ကျေးလိုက်တာ…မှတ်ထားဦး..”အဖေကြမ်းက လူကြမ်း၏..အမေကြမ်းက နှုတ်သရမ်း”၏…အစ္စလာမ် ကလူမျိုးခြားမယူဘူး..ဟုတ်စ…လွန်ခဲ့သော၁၉၉၅ ၀န်းကျင်လောက်ကဗိုလ်တစ်ထောင်ဗလီနားမှာ ၁၁၁ နာမည်နှင့်မိတ္တူဆိုင်ရှိပါသည်…ထိုဆိုင်ကို ဗလီမှဖြန်.ဝေစာလာကူးပါသည်…ဘာရေးထားလဲဆိုတော့ “စစ်တပ်မှ ဗိုလ်ကြီးသမီးကိုရလျှင်ဆုတော်ငွေဘယ်လောက်….ဗိုလ်မှူး , ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ,ဗိုလ်မှူးကြီး အစရှိသဖြင့်ရေးထားပါသည်…ကဲ…သင်ဘာပြောမလဲ…တောင်ကုတ်အမှုကို သင်ပြောသလိုဖော်ထုတ်မည်ဆိုပါက သင်သည် “အဖေကြမ်း” မှမွေးလာသောသူဖြစ်ရမည်…ရဲဘော်ကိုထွေး၏ အလုပ်သည် သက်တော်စောင့်သာဖြစ်သည်..ယောင်ရမ်းပြီး အာဇာနည် ထဲပါသွားခြင်းဖြစ်သည်…အရည်အချင်းရှိသူမဟုတ်…ထက်ပြောပါမည်….”အဖေကြမ်းက လူကြမ်း၏..အမေကြမ်းက နှုတ်သရမ်း”၏
saline tinmg says: မအေပေး ဖင်လယ်သေ
မိုးမှောင် says: saline tinmg သည် ချီးကြုံးကလားပါ ခွေးလွှတ်ကြပါ အတန်းပညာ ဝထကလသ
ပင်လယ် ပျော် says: saline tinmg သင်စာသေချာဖတ်ပါ….ရောမချပါနှင့်…၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ခဲ့သော ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်သည်…ဗလီမှ မုတ်ဆိတ်ကုလားများကိုယ်တိုင် လာကူးခြင်းဖြစ်သည်…သင်သည်လောက်ဆဲဆိုနေပုံထောက်လျှင် သင်တို့ မျိုးနွယ်သည်အရိုင်းအစိုင်းမျိုးနွယ်မှ ဆင်းသက်လာသောသူဖြစ်မည်…ဒါနောက်ဆုံးcomment ဖြစ်သည်…သင်နှင့်ဖက်ပြိုင်နေလျှင် သိက္ခာ ကျသည်…နောက်ဆုံးဘယ်သူမှန်/မှားပေါ်မည်…နှုတ်ဆက်ပါသည်….
Kyi Soe says: ဗုဒ္ဓကို ဘင်္ဂါလီလို့ အပြောခံရတာ ခွေးကိုက်ခံရတာထက် နာတယ်၊ ပြောသူကို တုန့်ပြန်စရာအကြောင်းမရှိပေမယ့် ကျန်တဲ့လူတွေ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်မှာ စိုးလို့ ပြောပါရစေ၊ ဗုဒ္ဓဟာ ဘင်္ဂါလီနဲ့ လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါဘူး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာသမိုင်း၊ အသောကမင်းကြီးကျောက်စာ အပါအ၀င်အိန္ဒိယသမိုင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့ပညာရှင်တွေနဲ့သမိုင်းတွေမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓမပွင့်မီအချိန်ကတည်းက ဇာတ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးကြတယ်၊ အိန္ဒိယလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ လူတန်းစားလေးမျိုးရှိတယ်၊(၁) ခတ္တိယခေါ်တဲ့ မင်းမျိုး၊ (၂) ဗြဟ္မဏခေါ်တဲ့ ပုဏ္ဏားမျိုး (သို့) ပညာရှင်လူတန်းစား (၃) ဝေဿ ခေါ်တဲ့ ကုန်သည် (သို့) သူကြွယ်မျိုးနဲ့ သုဒ္ဓခေါ်တဲ့ သူဆင်းရဲ အောက်တန်းစားလူမျိုးတို့ ဖြစ်တယ်၊ ဗုဒ္ဓဟာ ခတ္တိယခေါ်တဲ့ မင်းမျိုးဖြစ်တယ်၊ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ဘယ်အတန်းအစားထဲ ပါမလဲ စဉ်းစားကြည့်နိုင်တယ်၊ အိန္ဒိယသမိုင်းအရ ဗုဒ္ဓရဲ့ အမျိုးအနွယ်တွေဟာ အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းက ၀င်ရောက်အခြေချလာတဲ့ လူမျိုးစုဖြစ်တဲ့အတွက် အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ အထက်တန်းစားမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ အာရိယန်တွေနဲ့တောင် သွေးနှောမှာကို စိုးရိမ်တဲ့ အတွက် စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းခဲ့ကြတယ်၊ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓရဲ့အမျိုးအနွယ်ကို သကျသာကီမျိုးနွယ်လို့လဲ ခေါ်တယ်၊ သကျသာကီဆိုတာ အမျိုးအနွယ်ကို သွေးမနှောအောင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက် ပါဠိလို သက္က လို့ ခေါ်ရာကနေ ပြောင်းလဲလာတဲ့ အခေါ်ဖြစ်တယ်၊သာကီမျိုးနွယ်အကြွင်းအကျန်တချို့ နီပေါနိုင်ငံမှာ အခုထိရှိနေသေးတယ်၊ သူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ဟာ အိန္ဒိယမျိုးနွယ်တွေနဲ့ တခြားစီဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် ဘင်္ဂါလီဆိုတာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘင်ဂေါပြည်နယ်သားတွေရဲ့အမည်ဖြစ်တယ်၊ အိန္ဒိယမှာ အနောက်ဘင်္ဂေါပြည်နယ်ရှိနေသေးပြီး ခွဲထွက်ဘင်္ဂေါကတော့ အခု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပေါ့၊ ဗုဒ္ဓခေတ်က ဘင်္ဂေါဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တိုင်းကြီး (၁၆)တိုင်းမှာ သက္ကတလို ဗင်္ဂတိုင်း၊ မြန်မာအသံနဲ့ဆို ၀င်္ဂတိုင်းလို့ ရေးကြတယ်၊ ကောက်ကျစ်ယုတ်မာသူတွေနေထိုင်ရာ အရပ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် ဘင်္ဂေါတိုင်းသား ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓနဲ့ လားလားမျှမဆိုင် ဆိုတာကို ပြောချင်တယ်။
koyo says: အော် ပင်လယ်ပျော်ရယ် ပင်လယ်ထဲသာ သွားပျော်လိုက်ပါတော့။ မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာ
ပင်လယ် ပျော် says: အော်…ပြောဖို့ ကျန်သွားတယ်…သင်တို့ လူမျိုးများကို လူကြီးနေရာထားရအောင် ရှေးအရင်ထဲက နိုင်ငံအတွက် ဘာလုပ်ပေးခဲ့လဲ…
ကိုရင်မောင် says: တော်တော်စိတ်ပျက်ဘို့ကောင်းတဲ့ပို့စ်ပါလား………
Oo Oo says: ကလိန်ကကျစ်
ရှက်ကြောပြတ် .. အဟွတ် အဟွတ် :P
three colors says: Post writer is makingafalse story in reverse way with in-consistencies.
ဥဥ says: http://islamvirus.blogspot.com/?zx=a64274cb5d4aba61 သိချင်ရင် သွားကြည့်
မိုးတိမ် says: စောက်ခွေးကုလားတွေက ဒီလိုပါပဲကွာ။ အဲဒီလင့်တွေကော ဖတ်တတ်ပါ့မလားမသိ။
ဝေးလွင့်တိမ် says: ဘယ်လိုဂျီးတုန်း ဟ
ချာလီဂဇက်ဒလဝမ် says: ဗြောင်းဗြန်ဂျီးပါလား အရပ်ကတို့
ဘရားသား says: ဟောကြည့်ပါကွာ
may flowers says: “ကလေးမွေးဖွါးခွင့်တွေကအစထိမ်းချုပ်ထားတာ” တဲ့လား တော်သေးတာပေါ့ ထိမ်းချုပ်ထားလို့သာ
ကိုသင်း says: ရှက်တတ်ရင် လဲသေဖို့ဘဲရှိတယ်
abc mgmg says: The violence in western Myanmar started from the brutal raping and killing ofaRakhine (formerly known as Arakan) woman by three Muslims, the fact that two of them are reportedly Rohingyas is stillaheadliner in mainstream media.
abc mgmg says: http://dawn.com/2012/07/27/silent-views-on-the-myanmar-violence/
Thu Wai says: မိုက်တီး ဆိုတဲ့ကောင် မင်းတော့မီးတိုက်ခံရတော့မယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 198
Minn Zin says: တော်တော်ရီစရာကောင်းတဲ့ပို့စ်ပဲဗျ…
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ( အဓိကက နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ အခြေအမြစ် မရှိတဲ့
ကိုယ်စောက်သုံးမကျတာကိုလည်း ဝန်ခံကြအုန်း အရင်တုန်းကတော့ ကျုပ်လည်းမျှမျှတတတော့ တွေးပေးပါတယ်
ဒုတိယမ္ပိ ပေါက်လွှတ်ပဲစားဘာသှ် :D )
ကြောင်ကြီး says: ကိုပုမှန်၏။ ဒီအရေးမှာ တရားခံလဝကတွေ လွတ်နေတယ်။ သူတို့ကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလည်းဆိုတာ ရေရေရာရာ မပြောဖြစ်ကြဘူး။ သတင်းထဲမှာတော့ ရဲစခန်းတွေထပ်ချဲ့မယ်တဲ့..မြင်ယောင်သေးသကွာ ကုလားကြောက်လို့ ရဲအားကိုး ရဲနဲ့ကုလား အတူတူဆိုး ဖြစ်နေအုံးမှာ…။
မှတ်ချက်။ ဘပု ခင်ဗျား ဘဝကူးမကောင်းလို့ နောင်ဘဝ နွားဖြစ်ရင် သဂျီးအစား မခံရအောင် ကျုပ်ရောက်ရာအရပ်ကနေ ခင်ဗျားကိုဝယ်ကယ်မယ်။ နွားမတထောင်လည်း ရှာထားပေးမယ်။ စိတ်ချမ်းသာစွာ နေပါလော့..။ :D
P chogyi says: မြန်မာနိုင်ငံက လူကြီး(အုပ်ချုပ်သူ)များက
Phaung Phaung says: ဘာသာရေးဖိနှိပ်ခံနေရတယ်တဲ့… မိမိဘာသာဟာ သိပ်ကိုမွန်မြတ်သန့်ဇင်နေရင်တော့ ဖိနှိပ်ခံရတယ်လို့
မွန်မွန် says: အဲဒါပြောတာပေါ့..သူခိုးလူဟစ်ဆိုတာ… ဘယ်သူက လာနေပါလို့ ခေါ်ထားလို့လဲ.. မောင်းတောက ကုလားတစ်ယောက်က မိန်းမ ၄ ယောက်ယူပြီး သားသမီး ၂၈ ယောက်မွေးထားတာကို ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ ပြောချင်တာလား… တစ်ရာလောက်များမွေးချင်နေတာလား မသိဘူး… လည်လှီးသတ်တယ်ဆိုပဲ.. တကယ်လည်လှီးတဲ့ ဓလေ့က ဘယ်သူတွေရဲ့ ဓလေ့လဲ… ခွေးနေရာမရ ဖြစ်နေတိုင်း ဘာသာရေးကို ဆွဲမထည့်နဲ့… အဲဒီလို ဖိနှိပ်နေတယ်လို့ ခံစားရရင် ချက်ချင်းထွက်သွားပါလား.. ဘယ်သူကမှ လက်မခံလို့ တွယ်ကပ်နေပြီး လာစော်ကားနေတယ်.. ကိုယ့်အကြောင်းလည်း ကိုယ်မသိကြတာလား.. သိသိကြီးနဲ့ပဲ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား မသိတော့ပါဘူး.. ကိုယ့်နိုင်ငံပြဿနာကို ကိုယ်ရှင်းတာ.. မကျေနပ်ရင် အဲဒီတတိယနိုင်ငံတွေက ခေါ်သာထားလိုက်ကြ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3091
Foreign Resident says: ထူးခြားတဲ့အချက်ကို ရွာသူားတွေ သတိထားမိရဲ့လား ။
Shwe Phyu says: Since these kalars are the sons of bitch and grandsons of the pig, they can only make this kind of story.
we R one says: ကြက်သရေတုံးလိုက်တာ..
sitminnaing says: ဟေ့ကောင်မိုက်တီးဆိုတဲ့ သေရည်ကြိုးတစ်ပြားရေ…မင်းတို့ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ထင်ရင် လီးမို့လို့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာနေဖို့ကြိုးစားနေလဲကွ…မင်းတို့ကိုအားကိုးနေတဲ့ ပထွေးတွေဆီကိုသွားကြပါလား…ရေမျှောကမ်းတင်တွေရဲ့….
မိုးမှောင် says: ဘယ်သူများပါလိမ့်
Thanlwinoo says: အိတ်ဖွင့်ပေးစာရဲ့အရေးအသားက တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်..။
အားကိုးနေရပါလိမ့်မယ်..။ လက်ရှိအရေးအခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဓိကတာဝန်ရှိသူတွေ၊ ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာတွေကို ထိန်ချန်နောက်ပို့ထားပြီး အာဏာပိုင်မဟုတ်တဲ့ RNDP ကိုဘဲ ခေါင်းစဉ်တပ် လွှဲချထားတာ ထူးဆန်းနေပါတယ်…။ ဒါမှလည်း နောင်အနာဂတ်မှာ NLD နဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးများရဲ့ အဓိကပါတီ RNDP ကို ချေမှုန်းပြီးသား ဖြစ်သွားမှာပါ..။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကသယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ ကချင်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဆူပူမငြိမ်သက်မှုတွေဖြစ်နေတာဟာ တိုက်ဆိုင်မှုသက်သက်လို့ ထင်ဖို့မလွယ်ပါ..။
ကိုသင်း says: မဝသေးလို့ပြန်လာတာ တစ်မျိုးထင်ရင် Sorry,
Foreign Resident says: Admin တို့ရေ saline tinmg ရေးထားတဲ့အထဲက ၊
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ဘုရားပေးပေးကျမ်းပေးပေး ကျုပ်မဟုတ်ဘူးနော်အဘ
Foreign Resident says: ” ဘုရားပေးပေးကျမ်းပေးပေး ကျုပ်မဟုတ်ဘူးနော်အဘ
ဟုတ်ပါ့ ။ :P
ချင့် ယုံလိဖန် says: ရွေးဖျက်တဲ့သူ ကူလီမာလီ ကုလား အားပေးသူပဲနေမှာပေါ့
surmi says: ဗျို့  ဘပု
မိုးတိမ် says: saline tinmg
Mr admin says: မင်းတို့ အစ္စလာမ် တွေ မနေတာ ကောင်းတယ် …အင်မတန်မှ ပူလောင်ပြီး ရှူပ်ထွေးတဲ့ အစွန်းရောက် ကောင်မျိုးတွေ .. အာရုံနောက်တယ် …